Ubuntu: Fahatsiarovana ny teo aloha | Avy amin'ny Linux
Azo antoka fa maro no mahita ny lohanteny na mpanoratra an'ity lahatsoratra ity ary mieritreritra: Ho avy izy io elav manafika Ubuntu. Raha misy aminareo mieritreritra an'izany dia ampahafantaro azy ireo fa ny mifanohitra amin'izay no izy.
Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia nanomboka nanala ireo CD-ROM taloha nananako tao anaty vatasarihana aho, rehefa hitako ny kinova Ubuntu rehetra tamin'ny fotoana nandefasan-dry zareo ahy tamin'ny mailaka tamin'ny alàlan'ny serivisy aorinan'ny posthumous. Shipit.
Nahatsiaro nostalgia kely aho ary nanapa-kevitra ny hanandrana izany amin'ny Laptop fa indrisy, tsy nisy kinova nanomboka hatramin'ny 9.04, izay no farany azoko.
Tadidiko ireo fotoana ireo. Na dia nampiasaiko foana aza aho DebianNahafaly ahy ny famoahana Ubuntu rehetra satria tamin'izany, ho ahy irery no fizarana izay mitondra zava-baovao hatrany amin'ireo mpampiasa azy, farafaharatsiny ao amin'ny faritra Eyecandy.
Ny sary an-tsary sasany aloha dia avy eo, avy eo andiana kisary, avy eo ny lohahevitra Gtk sns. Niambina foana aho hahita ireo fanambarana miaraka amin'ny vaovao averiko amin'ity fotoana ity, nampientanentana ahy be izy ireo.
Mampalahelo fa tena nanomboka nanisy zavatra "vaovao" i Ubuntu ary ny hafa tsy dia be loatra, avy amin'ny kinova 10.04, satria na dia talohan'izay aza dia mitovy ihany GNOME rehetra, miaraka amina lohahevitra Gtk miloko mainty, ary tsy nisy zava-baovao tao ambanin'ny ambainy.
Lucid Lynx no kinova voalohany an'ny Ubuntu nanandrana nanakaiky kokoa ny OS X. Saingy tsy misy fanontaniana intsony izany ankehitriny. Ny tonga ao an-tsaiko dia ny fandehan'ny fotoana haingana be dia be ary tsapako izany (saika teo anelanelan'ny hatsiaka no nieritreretako fa mandalo ny fiainako), andrana kinova 9.04 tamin'ny 2009.
Avelako sary vitsivitsy ianao, saingy holazaiko aminao ny zavatra sasany na dia tsy nahagaga ahy aza izy ireo, dia nahasarika ny saiko izy ireo.
Voalohany, ny LiveCD dia tsy nahita vahaolana hafa noho ny 1024x768 sy 800x600. Na dia tsara aza ny pikantsary, amin'ny Laptop izay misy fampisehoana WideScreen dia hita fa nivelatra ny zava-drehetra.
Ny zavatra faharoa nahagaga ahy ahy dia ilay fahitan'ny Ubuntu izay nahamarika ny karatra tambajotranoko sy WiFi ... fa tsy nanaitra ahy ny tariby, fa ny tariby WTF? Tandremo, nahamarika ilay karatra izy io fa tsy namela ahy hifandray tamin'inona na tamin'inona .. fa hey, mihoatra ny nantenako io
Ny zavatra fahatelo nanaitra ahy kely dia ny fahitana kinova taloha amin'ireo programa izay ampiasako matetika ary raha ampitahako amin'ireo ankehitriny ireo dia afaka mahita fahasamihafana lehibe ianao.
Nahatonga ahy ho nostalgic kely izany, satria tadidiko ny fotoana rehefa OpenOffice 3.0 dia famoahana andrasana hivoaka amin'ny kinova 2.0, ary androany izany LibreOffice 4.4 iza feno fanatsarana sy fanovana no ampiasaina amin'ny solosainako.
Misy koa ny zavatra manaitra ahy, ohatra ny tranga GIMP. 5 taona no lasa ary kinova 2 ihany no navoaka nanomboka teo (fampandrosoana iray amin'izany). Ao amin'ny Ubuntu 9.04 kinova 2.6 an'ny GIMP no nampiasaina ary androany dia mandroso amin'ny 2.8 fotsiny isika.
Ireo no zavatra itarafana ahy. Ny GIMP dia voaporofo ho programa manana kalitao tena tsara, izay mahay mifaninana amin'ireo namany mifaninana aminy, nefa toa tsy dia misy ny sainy rehetra tokony hivoarany. Tsy fahampian'ny teti-bola sa zanabola? Ary andro vitsy lasa izay dia nisy kinova vaovao an'ny sampana 2.8 natomboka ary raha ny marina dia tsy ny fananganana balafomanga no fanovana.
Saingy hiverina any Ubuntu, tsy haiko ny antony manandramana ireo kinova taloha ireo sy mijery ireo vaovao izay misy ary ho avy mifoha amin'ny fihetseham-poko mifangaro. Nivoady aho fa tsy hiteny ratsy an'ity distro ity intsony, saingy tsy afaka ny tsy hahatsapa aho fa lavitra ny taloha ny Ubuntu androany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ubuntu: Fahatsiarovana ny andro taloha
9.04 no kinova voalohany nanandramako, tsy ny Ubuntu ihany, fa ny Linux ihany koa. Tsaroako ireo ady natrehiko nanamarika ny tenako mba hahombiazany, sy ny fahafaham-po amin'ny fahitana fa mandeha tsara ny raharaha. Nanomboka tamin'izay dia nanandrana distro hafa aho, fa ho fanamorana dia miverina any Ubuntu foana aho (io no manome ahy olana kely indrindra). Mikasika ny fivoarana nisy azy, ankoatry ny adihevitra momba ny hoe Linux na tsia, tsy maintsy milaza aho fa tiako ny Unity, izay aleoko manokana ilay mpitantana ny birao teo aloha izay tsy azoko ovaina mihitsy.
«... saingy tsy afaka ny tsy hahatsapa aho fa ny Ubuntu ankehitriny dia lavitra ny taloha.»
Mazava ho azy elav, ary io dia tena lava ny fiainana, fa mandalo haingana dia haingana. Mieritreritra ihany koa isika fa tsy tsy misy nostalgia, fa ny fotoana taloha dia tsara kokoa foana. Fa tsy toy izany. Tapitra ny fotoanan'ny Ubuntu 10.04 ary hafa ankehitriny. Sady tsy tsara no tsy ratsy: tsy miova ny fotoana, ireo niova dia isika izay mahita zavatra amin'ny fomba fijery hafa. Ary raha tsy mijery ny isan'ny fizarana GNU / Linux izay tsara kokoa ianao ankehitriny noho ireo izay Ubuntu tamin'izany fotoana izany. Ary efa lasa ve i Ubuntu. Tsy maintsy miady be i Ubuntu raha te haka indray ny taloha.
Azoko tsara ny alahelonao, ary mitovy ny zavatra tsapako momba an'io, nefa tadidio fa miova ny zavatra, indraindray tsy araka ny itiavan'ny olona iray, ary vao mainka aza fa rehefa nivoha ny vavonin'i Dadatoa Mark, tsara, mahatsiaro velona!
xDDD Mbola tadidiko ihany ilay kinova ratsy indrindra an'ny Ubuntu, lohahevitra mahatsikaiky nananany io, tadidiko fa tao amin'ny solo-tanan'ny namana iray dia tsy nahafantatra na inona na inona momba ny fitaovany izy eeehhe
saingy tiako ilay izy satria manana ny mistika atsimo atsinanana, tiako ilay lokon-tany
dia ny fotoana voalohany nahitako ubuntu tamin'ny fampisehoana tao amin'ny dôdiôdôdiôma (trano ekolojika vita amin'ny tanimanga miendrika sphere)
Eny, tsy maintsy atao ny mampifanaraka ny tenantsika amin'ny fomba fiasa sy ny fanoherana ny fiovana kely foana.
Eny, nampidina Ubuntu 12.04 aho tamin'ny fampiasana cd farafahakeliny ary nametraka azy tsy nisy birao, satria tsy tiako ny fampiasana ny Unity. Avy eo nametraka ny MATE aho ary tiako tokoa ny fitoniana vitako. Mahatsiaro ho toy ny Ubuntu 10.04 izay tiako be aho. Raha mpampiasa manana traikefa vitsivitsy ianao, miaraka amin'ny Ubuntu dia mora be ny manao asa rehetra tonga aminao, izay miaraka amin'i Debian, Arch, sns. Tsy vitako izany, nilaiko foana ny afaka nanao zavatra sasany izay niaraka tamin'i Ubuntu taty aoriana raha azoko atao. Ataoko fa ho izany satria ny fiarahamonina Ubuntu no mbola lehibe indrindra, mamela fanohanana bebe kokoa.
AncientSoul dia hoy izy:
Azoko atao ny manontany anao hoe inona izany androany? Archilinuxero aho, mamaly izy nefa tsy misy teny kely.
Mamaly an'i AncientSoul
Na dia maro aza, maro no nanao ny fitaovam-piadiany voalohany tamin'ny fizarana hafa, ny ankamaroany dia tonga tany amin'ny GNU / Linux World tamin'ny alàlan'ny Ubuntu .. Raha ny tena izy, taloha dia tsy fizarana ratsy izany. Androany, heveriko fa diso lalana no nalehany. Lasa ilay "Windows" GNU ...
Mifanohitra aminao, ny lohahevitra izay navoakan'ny kinova taloha tamin'i Lucid, satria tena tiako izy ireo.
Ny nolaviko foana, raha mampiasa Ubuntu, dia ny vanim-potoana fanavaozana azy. Tsy te-hametraka rafitra fiasa amin'ny 0 isaky ny 6 volana aho, na matahotra fa raha manavao ny kinova taloha aho dia ho tapaka daholo.
Manana trosa be dia be amin'ny Ubuntu aho, saingy anio dia tsy fitsinjarana ilaiko na hampiasaiko.
@elav. Mihobia !!!. Nampiasaina nandritra ny fotoana iray aho - eo anelanelan'ny Debian sy Debian- Ubuntu kinova 6, 7, 8, 10 ary 11. Miaraka amin'ny 8 dia io no niaraka tamin'ny lava indrindra, na dia amin'ireo mpizara roa aza mba hanao virtoaly amin'ny VMware 1.0.8. Ary izany dia araka ny voalazanao. Ny GNOME dia fenitra. Tsaroako fa tamin'ny Hardy dia nanao birao avy amin'ny fametrahana ho an'ny mpizara aho. Ary niasa tamin'ny kilao izy io. Amin'ireo Ubuntus rehetra dia i Hardy no tiako indrindra. Serivisy 5 eo ho eo ao amin'ny orinasa mpiara-miasa amiko no napetrako, ary mbola miasa izy ireo, miaraka amin'ny Hardy. Na ny Squid misy ahy aza dia miasa any Hardy hatramin'ny nametrahako azy tamin'ny voalohan'ny taona 2010. Ireo mpizara hafa miaraka amin'ny Linux, ampiarahiko amin'i Etch sy Lenny izy ireo
Ampahatsiahivinao ahy ny fotoana nanombohako nampiasa ny Debian tamin'ny kinova 5.0. Mbola tadidiko ny olana fa tsy maintsy namboariko tanana ny kitendry tamin'ny alàlan'ny interface graphique GNOME (satria ny installer graphique dia tsy nandamina tsara ny layout keyboard).
Ny tena fiovana tsapako tao amin'ny Debian dia ny Squeeze, satria nanana ny Software Center aho tamin'ny farany ary tena nankafiziko be izany.
Miaraka amin'i Wheezy aho izao ary mampiasa Iceweasel sy Uzbl miaraka amin'izay.
Jaunty 8.04 dia be mpampiasa mba hampifanaraka azy amin'ny kahie koreanina, tsara lavitra noho ny Linpus Linux izy io ary nanomboka tamin'io fotoana io (2008) dia efa nahafantatra ny karatra wifi Broadcom miaraka amin'ilay mpamily b43 tompona taloha. Ny Ubuntu Studio 12.04 (Precise) dia tena soso-kevitra (mampiasa XFCE) ary vitsy ny fomba fanao mampifanaraka azy nefa tsy misy olana Gnome Classic hitovy amin'ilay Lucid Lynx10.04 angano.
Ny kinovan'ny Ubuntu izay tiako sy nampiasaiko indrindra dia 10.04 ary ny farany nampiasaiko dia 11.04 ary tsy nampiasa Ubuntu intsony aho nandritra ny herinandro mahery.
Manaiky aho .. I Lucid no kinova farany tsara amin'ny Ubuntu andramako.
Mbola manana Ubuntu 9.04 aho amin'ny fizarazarana izay tsy nofafako. Tamin'ny fotoana hafa nampiasako azy io nandritra ny fotoana kelikely ary tsy niresaka momba ny hatsaran'ny Nautilus aho tamin'izany fotoana izany, ratsy loatra ... efa fantatsika ny tantara ...
Ahahahhah ampiasaiko tsy misy olana izany ao amin'ny Fedora 19 ary tsy nanao zavatra tsy hita aho xD
Ny kinova Ubuntu tsara indrindra dia 10.04, tadidiko fatratra izy io satria tamin'io vanim-potoana kanônika io dia nandefa ireo kopia tamin'ny alàlan'ny mailaka aho ary na dia teo aza ny fahafahako nisintona azy tamin'ny alàlan'ny pejy ubuntu sy nametraka azy, dia nanana tebiteby hangataka aho ny iray ary tonga tany an-trano aho, lol mbola ananako eto amin'ny fanangonana distros ...
Jeus Israel Perales Martinez dia hoy izy:
Mahazo nostalgic ianao rehefa mahita ny distro taloha ary mahatadidy ireo fotoana mahafinaritra, ny distro voalohany nataoko dia ny backtrack 3, izay vao naka ny windows xp ary avy eo tonga tany Ubuntu 10.04, na Andriamanitra izay nitranga: '(snif snif
Valiny tamin'i Jeus Israel Perales Martinez
Tsaroako i LInux Mint 7 Gloria izay WALLPAPER tsara tarehy nananany.
Antonio Galloso dia hoy izy:
Marina izany, eo an-dàlambe i Ubuntu, ho ahy, ny kinovolo 10.10 no tsara indrindra tamin'ny rehetra, nanomboka teo dia tsy tiako mihitsy izany.
Valiny tamin'i Antonio Galloso
Eny, raha tsy namorona ny Unity i Ubuntu, inona no nitranga? Amin'izao fotoana izao dia hampiasa akorandriaka gnome aho, ary hitsikera ny olona ny antony tsy hanavaozan'ny Ubuntu. Heveriko fa nanao izay tokony hataony i Ubuntu, mieritreritra aho fa raha mametraka ny tenantsika amin'ny kirarony isika dia afaka mahita fa tsy manao ny zavatra ataon'izy ireo mba hahasosotra ny vondrom-piarahamonina (na dia maro aza ny zavatra ataony), fa amin'ny mba hahatratrarana ny tanjon'izy ireo, heveriko fa ny zava-drehetra dia misy fanazavana mitombina, raha te hanavao ny hafainganana amin'ny hafainganana izy ireo dia tsy maintsy mihetsika samirery ary tsy mametra ny tenany amin'ireo antony ivelany hafa, efa fantatra fa raha fiainana iray mieritreritra ny eritreritry ny hafa sy lazainy, amin'ny farany dia tsy hanao na inona na inona izy, ary heveriko fa izany no eritreritry ny olona momba an'i Ubuntu.
Mitovy hevitra aminao aho. Ny fanehoan-kevitrao dia mahatonga ahy hieritreritra fa angamba te ho # 1 i Ubuntu, izany hoe, rehefa miresaka momba ny rafitra miasa ianao dia ataovy hoe "Windows, Mac na Ubuntu".
Na dia mahatsiaro ho diso fanantenana na tsy henoina aza ny ankamaroan'ireo izay manaraka azy ho distro ankafiziny, satria nitodika tany amin'ny vondron'ireo mpampiasa azy izy; Raha mijery azy ireo isika dia eo anelanelan'ny vatolampy sy ny toerana sarotra izy ireo: manavao, mitombo ary laharana voalohany; na mifanaraka amin'ireo mpampiasa azy rehetra.
Heveriko fa maro amintsika no tsy nanomboka ary nahafantatra ny GNU / Linux izahay noho ny Ubuntu. Mampalahelo fa tsy dia mampiahiahy an'ity distro ity aho izao, satria izay rehetra niresaka momba izany dia spyware sns. Fa hisy hatrany ireo mpampiasa vaovao izay hampiasa ity distro ity ho voalohany. Ho an'ireo izay tsy mahalala ny safidy rehetra dia toa tsara izany.
Ilay nampiasako virtoaly dia 10.04, ary mihazakazaka be dia haingana, eo am-piandohana dia 120 RAM fotsiny no laniny, mampalahelo fa ny gnome 2 dia tetikasa maty, na dia mbola maty aza
tsy tonga eto ity fanehoan-kevitra ity. Ary tsy afaka mamafa izany aho
Toa ny ankamaroan'ny olona, ​​mpampiasa Ubuntu ihany koa aho. Tena nitsikera izy ny amin'ny làlan'ny fivoarany, ary tsy nizara ny marika urra Marka !.
Fahadisoana tanteraka izany, tsy ho ahy ny Ubuntu.
Tadidiko fa izany no zava-bitako voalohany tao amin'ny Linux: ') satria tiako io kinalan'ny Ubuntu io, nanokatra ny masoko tamin'izao tontolo izao izy ary nahatonga ahy hiditra sy hankafy ny fiainana tahaka ny ataoko anio ao amin'ny Linux, misaotra betsaka Jaunty 🙂
Ny fiovana sy ny fivoarana rehetra, ny MacOS sy ny Windows koa dia niova (ary tsy manana fizarana hafa azo isafidianana ianao, afa-tsy ny mijanona amin'ny kinova taloha ihany)
NY fanovana REHETRA, manomboka amin'ny gnome, kde, internet ... mankany amin'ny kiraronao.
Ho an'ny lasa voahitsakitsaka ary raha tsy mitandrina ianao dia mitazona izay tianao indrindra (farafaharatsiny amin'ny fizarana Linux dia azonao atao ny misafidy ny hampiasa xD)
Ahh .. !! nostalgia …… !! (Tadidiko ny famelabelarako tao amin'ny forum)
Tany am-piandohan'ny fotoana (vanim-potoanan'ny solosaiko) rehefa nianatra nampiasa win95 aho ary nividy magazine amin'ny solo-saina tamin'ny cd, ny linux voalohany tsy nametraka / nanandramana dia ny lppp linux, avy eo ny redhat 5.0 (miaraka amina boky paosy fampidirana ho an'ny linux, izay tsy dia azoko tsara tamin'io fotoana io), avy eo mandrake 7.1, avy eo mandrake 7.2 izay farafaharatsiny mba nahafantarako ny programa fametrahana izay nanontany ahy ny tontolo, fampiharana sy fitaovana tiako hapetraka hapetraka rehefa apetraka , fa noho izany dia nitaky cd faha-2 Tsy tonga fanomezana izany ary tsy nieritreritra ny hampiasa ny laharan-telefaona miaraka amin'ny modem 33.6kb, avy eo tonga ny linux1 fototra, avy eo ny winlinux2000 izay napetraka tao amin'ny win2 98 miaraka amina kde birao fa tsy nahasarika ny saiko izany.
Taty aoriana tany amin'ny oniversite dia nisy mpiara-miasa iray nanome ahy ny ubuntu 5.04 voalohany (wow) fa tamim-pahasarotana dia nanandrana k6-2 400mhz aho misy 128 amin'ny ram, avy eo ubuntu / kubuntu 7.04.
Fa ny nahaterahako dia ho tonga tamin'ny 2009 rehefa nametraka ny Linux mint 8 Helena (anaran'i Neny) amin'ny solosaina findainy aho, avy eo LM9 amin'ny birao, avy eo LM13.
Ankehitriny dia mitazona ny ubuntu 5.04 sy 7.04 cd fotsiny aho
Nanomboka nampiasa Ubuntu aho rehefa avy nampiasa Mandrake sy Debian. Faly niaraka tamin'i Debian aho, saingy vaovao tamiko ny Ubuntu.
Lazaina ny marina, nanaitra ahy io kinova io rehefa nahita an'i Mozilla Firefox tamin'ny Linux aho. Tsy tiako ny rafitry ny fanavaozana azy, koa nampiasako azy ho LiveCD fa tsy zavatra hafa.
Rehefa nanomboka nampiasa Debian aho dia rehefa nivoaka ny Squeeze, satria tao amin'ny GNOME dia tsy nanana ny sary famantarana azy io, nosoloina ny logo Debian ihany izy tamin'ny farany, ankoatr'izay manana ny ivon-toeran'ny rindrambaiko izay ananan'i Ubuntu ary afaka nametraka ilay flash ihany aho tamin'ny farany. mpilalao, na dia ao amin'ny Debian aza dia nampiasa script izay nametraka azy tamin'ny adobe sute tamin'ny alàlan'ny script, noho izany dia nanome fahatokisana bebe kokoa ny fampiasana an'i Debian.
Nampiasako izany tao amin'ny netbook asus Eeepc700 ahy, ilay netbook voalohany nivoaka, izay naseho Xandros namboarina tamin'ny menio kisary lehibe toa kilalao.
Nametraka Ubuntu aho ary nanidina izy, PC kely bitika tena mahery izy io, tiako ilay lokon'ny tany sy ny feon'ny amponga rehefa manomboka.
Io Ubuntu dia nanana mistika maro noho ny Wave Afrikanina izay ananany, rafitra miasa maimaim-poana avy any Afrika. taty aoriana dia nosoloin'izy ireo tamin'ny fomba Mac izay tsy mahasarika ahy.
oh, ary tamin'ny fotoana voalohany nahitako ny Linux, dia ny Ubuntu 8 tamin'ny fampisehoana ireo namana manodidina ny tontolo iainana izay nanao Permaculture, avy teo dia tiako be ilay izy.
Vaovao tamiko ireo zavatra roa ireo, tsy fantatro hoe inona ilay percultum, na rindrambaiko maimaimpoana. Noho izany, ampifandraisiko amin'ny lozisialy sy fizarana ny rindrambaiko maimaimpoana.
Amin'ny lafiny tsy anoratako avy amin'ny PC-ko, izany no antony anoratako avy amin'ny Windows.
Mbola mahatakatra anao aho. Ubuntu talohan'ny kinovan'ny 10.10 no tsara indrindra, fa tsy izy izao (noho izany antony nampiasako an'i Debian Squeeze hahatsapa ny voninahitra very an'i Ubuntu).
Ny ubuntu voalohany nataoko dia Karmic Koala. Tiako ilay anarana XD
Eny, ao amin'ny infocenter / famakiam-boky ao amin'ny oniversite itoriako, dia mbola manana Ubuntu 8.04 mihazakazaka Firefox 3.6 amin'ny solosain'izy ireo sasany ho fampiasan'ny mpianatra (hehy).
Etsy andanin'izany, misy mahalala ve ny baiko sudo hanavao ny Gimp? Somary olom-baovao aho na eo aza ireo tolona ireo.
Nanomboka tamin'ny Ubuntu 8.04 aho, nefa tsy isalasalana fa ny kinova Ubuntu tsara indrindra navoaka dia 10.10.
Daku dia hoy izy:
Manaja an'i Ubuntu aho, satria io no fizarana rindrambaiko voalohany maimaim-poana ary miaiky aho fa tena tsara ny kinova 8.04 sy 8.10, tsy nanakivy ahy ny kinova farany, ary tsy nandiso fanantenana azy ireo, tsara ... avy amin'ny andiany 11.04 hatreo ihany, don aho 'Tsy mieritreritra fa tena fizarana tena tsara izy ireo, satria mavesatra kokoa, henjana kokoa ary tsy dia mora volena izy ireo (Raha ny hevitro).
Noho io antony io ihany dia nifindra tamin'ny fizarana rindrambaiko maimaimpoana hafa aho ary indraindray dia mampiasa Ubuntu aho, fa ho an'ny nostalgia fotsiny.
Mamaly an'i Daku
Nanomboka tamin'ny 6.10 aho ... ary ilay tiako indrindra dia heveriko fa 7.04 satria io no nanombohako nanomboka nitety zavatra, nametraka sy nanamboatra (izay tsy maintsy vita tanana tamin'ny farany) ny beryla + emeraoda, tambajotran-tsoratro amin'ny alalàn'ny USB ... Hatramin'ny 8.04 dia efa nanomboka nisedra disro hafa aho ary nunk niverina tany Ubuntu tanteraka aho, nanandrana kinova maromaro taty aoriana sy 12.04 natao niaraka tamin'ny XFCE tao amin'ny solosainako nandritra ny roa volana, fa izaho kosa tsy mbola nanana an'io ho "default" », Misy foana ny fotoana mahatezitra ahy amin'ny fikorontanan-tsaina sasany ka mitsambikina amin'ny iray hafa.
Io no kinova Ubuntu voalohany hitako. Hitako tao amin'ny atrikasa misy ahy io ary satria tsy azoko ny fametrahana ny codec hahafahan'ny mpanjifa milalao MP3 dia namerina nametraka an'i Windows aho. Tsy dia reharehako loatra izany, fa ny tsilo ny te hahafanta-javatra niraikitra tamiko ary nanorim-ponenana aho taorian'ny 10.04. Androany tsy manana dualboot akory aho - Ubuntu fotsiny no ampiasaiko. Ary toa mora kokoa amiko izao ny Ubuntu noho ny teo aloha.
Izaho koa dia avy tamin'ireny fotoana ireny, nanome ahy cd ubuntu toy izao izy ireo ... mianiana aho fa tiako izany, na dia nanana olana tamin'ny Internet aza aho (izay misaotra an'i ubuntu colombia azoko vahana) dia tsara daholo ny zava-drehetra.
Be loatra, fa eo amin'ireo latabatra malalako dia miverina amin'ny kilasika foana aho, na ny gnome 2, matte, na zavatra hafa na kely kokoa itovizany amin'ireo takelaka karazana lxde na mitovy 🙂
Ankehitriny avy amin'ny Scientific Linux dia mankafy ny fifandraisan'ny taloha aho, miaraka amin'ireo programa sy rafitra mahomby. mahafaly
ubuntu 10.04 no distro voalohany nataoko: '(manome ahy nostalgia
Rakitra fametrahana Linux Arch + KDE: Fametrahana tsikelikely
Numix: Lohahevitra mahafinaritra miaraka aminao